Ka hor doorashada 24 -ka Diseembar , Liibiya ayaa khamiistii marti-gelisay saraakiil sare oo ajnabi ah si looga taageero amuuraha qallafsan ee hadda horyaalla waddanka. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Ka hor doorashada 24 -ka Diseembar , Liibiya ayaa khamiistii marti-gelisay saraakiil...
Ka hor doorashada 24 -ka Diseembar , Liibiya ayaa khamiistii marti-gelisay saraakiil sare oo ajnabi ah si looga taageero amuuraha qallafsan ee hadda horyaalla waddanka.
Iyadoo bixineysa war-murtiyeed lagu soo gabagabeyey shir, Wasiirka Arrimaha Dibadda Liibiya Najla Mangoush ayaa carabka ku adkeysay baahida loo qabo tallaabooyin suuragal ka dhigaya daah-furnaan iyo in loo dhamaado doorashooyinka December. War-murtiyeedka ayaa waxaa ka qayb ahaa wasiirrada arrimaha dibadda ee Faransiiska, Talyaaniga kuwa dowladaha Carabta, iyo sidoo kale saraakiil Mareykan iyo Qaramada Midoobay ka tirsan.
“Dowladda midnimada Liibiya waxaa si xooggan uga go’an dhowrida madaxbannaanida, amniga gobolka iyo midnimada qaran ee dalka. Waxayna si weyn u diidday faragelinta shisheeye ee arrimaha Liibiya, sidoo kale waxay cambaareysay isku dayga lagu jebinayo cunaqabateynta hubka iyo kincinta qalalaasaha.”
“Waxaa muhiim ah in la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo dhiso kalsooni loona abuuro jawi ku habboon si doorasho daacad ah oo hufan loogu qabto doorashooyinka qaranka 24-ka December 2021.”
Awoodaha shisheeye ayaa ku doodaya baahida loo qabo in doorashada loo qabto sidii loo qorsheeyay, ka dib markii taariikhda lagu heshiiyey wadahadallo ay Qaramada Midoobay hoggaaminaysay sannadkii hore. Laakiin habsocodka waxa saameeyay ku yeeshay khilaaf ba’an ee salka ku haya sharci ahaanta codbixinta.
Ujeeddada shirka Khamiistii ayaa ahaa “in la soo uruuriyo taageerada lagama maarmaanka ah, si daah furan” Codadka madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa loo cayimay hal maalin laakiin bishii la soo dhaafay ayaa baarlamaanku ku dhawaaqay in doorashooyinka sharci-dejinta, oo ah kii ugu horreeyay ee dalka tan iyo 2014, dib loo dhigo illaa Janaayo
Ka qaybgalayaasha shirku waxay ahaayeen ilaa 30 ergo, oo qaarkood wakiillo ka ahaayeen Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabta.
Previous articleSomalia leaders agree to ‘accelerate’ election process
Next articleMadaxa Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa khamiistii sheegay in xaaladda cimilada ee hadda jirta ay tahay “tigidh hal dhinac ah oo masiibo ah”